#Kevin de Bruyne oo qandaraas cusub u saxiixay Manchester City | Get Latest News From Horn of Africa
Home Somali #Kevin de Bruyne oo qandaraas cusub u saxiixay Manchester City
#Kevin de Bruyne oo qandaraas cusub u saxiixay Manchester City
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee Manchester City Kevin De Bruyne ayaa saxiixay heshiis cusub oo shan sanno ah, hogaamiyeyaasha Premier League ayaa ku dhawaaqay. Xiddiga reer Beljam, oo City kaga soo biiray Wolfsburg sannadkii 2015, ayaa haatan qandaraaskiisu dhacayaa ilaa 2023kii.
Heshiiska waxaa lagu qiimeyay € 340,000-toddobaadkii, waxaana marka lagu daro gunooyinka uu gaari doonaa ilaa € 400,000-toddobaadkii.
“Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan saxiixay heshiiskan cusub” ayuu De Bruyne u sheegay website-ka kooxdiisa.
Kevin de Bruyne ayaa doortay inuu mustaqbalkiisa cayaareed sii ahaado garoonka Etihad madaama uu wax weyn ka faa’iiday ka hoos shaqeynta macalin Pep Guardiola.
Kubad sameeyahan Belgium-ka ah City waxay lacago iskoor ah 55-milyan oo pound kaga soo qaateen naadiga Wolfsburg sanadii 2015 wuxuuna kusoo baxay hogaamiye City marnaba aysan ka maarmin.
Man City oo EPL-ka 12-dhibcood ku hogaamineyso waxay ku jirtaa hawl muhiim ah oo ah inay xidigaheeda muhiimka ah inay heshiis ka saxiixdo ayadoo dhawaanahan qandaraaska u dheereesay Jesus, Ottemendi, Stones, Fernandinho iyo xidigo kale.
Kevin de Bruyne ayaa ah musharaxa ugu cad cad xili cayaareedkan inuu ku guuleesto laacibka EPL ugu wanaagsan asigoo dhaliyay 6-gool sidoo kalena 10-kubadood caawinaad ka geestay.